31 Comments 2201 Views
The meeting took place on the sidelines ofapeace forum held in Nay Pyi Taw, at which both the State Counsellor and KNU leader Saw Mutu Say Poe spoke.
“The chairman of the KNU and Daw Aung San Suu Kyi met forashort time during the tea break. They did not discuss any particular topic but exchanged greetings and normal conversation,” said Padoh Mahn Nyein Maung, second general secretary of the KNU’s Central Executive Committee. “They did not talk about politics.”
The meeting was the first between the State Counsellor and KNU leader since the armed ethnic group decided last month to temporarily pull out of the peace process. The KNU is one of the more powerful armed ethnic groups in the country.
Observers said the meeting breathed hope into the floundering government-initiated peace talks that have made no significant progress over the past two years.
Another armed ethnic group, the Restoration Council of Shan State-Shan State Army (RCSS/SSA), also said recently that it is reviewing its participation in the peace talks.
KNU leader Saw Mutu Say Poe listening toaspeaker at the forum on Wednesday. Photo: EPA
Eight other armed ethnic groups have signed the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA), which isaprecondition for participating in the peace process.
Other armed groups have not signed the NCA.
Two days before the Nay Pyi Taw forum, government peace negotiators met with representatives of the 10 NCA signatories and some non-signatories in Chiang Mai, Thailand.
U Zaw Htay, the spokesperson for the President’s Office, said the meeting ended onapositive note, with all the groups reaffirming their determination to achieve peace.
“Both sides discussed how to keep moving forward on the NCA path,” he said.
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ကေအင်န်ယူဥက္ကဋ္ဌတို့ သီးသန့်တွေ့ဆုံ
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌမူတူးစေးဖိုး နားမည်
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးတို့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက် နံနက်အစောပိုင်း နေပြည်တော်၌ သီးသန့်တွေ့ဆုံကြကြောင်း သိရသည်။
“နံနက်အစောပိုင်းက အစည်းအဝေး မစခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌကြီး (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး) ကို ခေါ် ပြီး တွေ့တာဗျ။ ကျွန်တော်တို့တော့ မပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့ သူတို့တွေ့ပြီးပါပြီ” ဟု ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင် နာယကဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာက ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်း ရေး (ငြိမ်းချမ်းမေတ္တာ) အဖွဲ့၏ အကြံပြုဆွေးနွေးဝိုင်းကို တက်ရောက်ရန် ကေအင်န်ယူဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူး စေးဖိုးအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်အချို့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်က နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိ နေခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အစိုးရ၏ တရားဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများကို ပါဝင်ရန် ယာယီရပ် ဆိုင်းထားသော ကေအင်န်ယူအဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌကို ထိုဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်၌ သီးခြားခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုးသည် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေး ထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST) ၏ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားသူဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းအနေဖြင့် ထိုတာဝန်မှ အနားယူကာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ပဒိုစောတာဒိုမူးအား PPST တွင် နေရာပေးမည်ဟု သိရသည်။
“ဥက္ကဋ္ဌကြီးက အနားယူမယ်လို့တော့ သတင်းထွက်နေတာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ တရားဝင်တော့ မဟုတ်သေး ပါဘူး၊ တရားဝင်ဖြစ်ဖို့ PPST အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ အတည်ပြုဖို့ လိုတာပေါ့ ”ဟု ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာက ပြောဆို သည်။
ကေအင်န်ယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သူ ပဒိုစောတာဒိုမူးကို PPST တွင် နေရာပေးရေးကို နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သော ကေအင်န်ယူ၏ ခြောက်ကြိမ်မြောက် ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ၏ အရေးပေါ်အစည်း အဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကေအင်န်ယူဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်က အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
အင်န်စီအေလက်မှတ်ထိုးအဖွဲ့များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌနေရာအပြောင်းအလဲ အတွက် မကြာမီပြုလုပ်မည့် PPST အစည်းအဝေး၌ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။